जापानमा कसरी टिकट र टुरहरू बुक गर्न र खरीद गर्न सकिन्छ! सुमो, बेसबल, कन्सर्ट, गतिविधिहरू ... - Best of Japan
होटल अतिथि = शटरस्टकमा कागजातहरू दिने द्वारपाल
यदि तपाईं भ्रमणमा भाग लिनुहुन्न जुन ठूलो समूहसँग कार्य गर्दछ र तपाईं मित्रहरू वा परिवारसँग जापानमा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कसरी खेल प्रतिस्पर्धा र कन्सर्टको लागि टिकट बुक गर्नुहुन्छ र खरीद गर्नुहुन्छ। वा तपाइँ गतिविधिहरू जस्तै टुरहरूको लागि कसरी आवेदन गर्नुहुन्छ? जापानमा टिकट र भ्रमणका लागि बुकिंग साइटहरू छन्, तर प्राय जसो जापानी भाषामा लेखिएको छ। त्यसो भए, यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई परिचय गराउन चाहन्छु कसरी जापानको यात्राको लागि बिभिन्न टिकटहरू र टुरहरू बुकिंग गर्ने।
जापानमा आउनु भन्दा पहिले तपाईंसँग राम्रो रिजर्भ लोकप्रिय टिकट र यात्रा थियो
तपाईंको होटेलमा द्वारपालकलाई सोध्नुहोस्
आफ्नो साथी वा परिचितलाई सोध्नुहोस्
जापानी टिकट पसलहरूमा खरीद गर्नुहोस्
ओन्नुमा पार्कमा, तपाईं हिउँमा चलाउन सक्नुहुनेछ र तालमा हिंड्ने हिउँदमा हिउँ पर्ने
प्रमुख आरक्षण साइटहरू अंग्रेजी समर्थन गर्दैन
जापानमा हामी कन्सर्ट जस्ता टिकट आरक्षित गर्दा हामी टिकट बुकि booking साइटहरू जस्तै "लसन टिकेट" "टिकट पिया" राख्छौं। हामी नजिकको सुविधा स्टोरमा आरक्षण टिकटहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। यी सेवाहरू धेरै उपयोगी छन्। यद्यपि, धेरै जसो टिकट आरक्षण साइटहरू हाल अंग्रेजी, चिनियाँ आदिसँग मेल खाँदैन। यी साइटहरू प्रयोग गर्न जापानी क्षमता चाहिन्छ।
त्यहाँ जापानमा पर्वतारोहण जस्ता पर्यटनका लागि धेरै आरक्षण साइटहरू छन्, तर यी मध्ये धेरै केवल जापानीसँग पनि उपयुक्त छन्। तपाईं एक जापानी अवरोध सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं जापान जानु भन्दा पहिले जापानमा विभिन्न आरक्षण साइटहरू ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं आफैले रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्न भने, निम्न तरिकामा प्रारम्भिक बुक गर्नु राम्रो हुन्छ।
लोकप्रिय कन्सर्टहरू, खेलकुद प्रतियोगिताहरू, गतिविधि भ्रमणहरू तपाईं जापानमा आउनु अघि रिजर्भेसनको पूर्ण सम्भावना धेरै हुन्छ। जे भए पनि तपाईले तलका कार्यहरू सक्दो चाँडो गर्नु पर्छ।
निम्न आरक्षण साइटहरूको उपयोग गर्नुहोस्
जापानमा माथि उल्लेख गरिए अनुसार धेरै जसो टिकट र भ्रमणका लागि आरक्षण साइटहरू अंग्रेजी, चिनियाँ आदिसँग मेल खाँदैन। यद्यपि तल बुकिंग साइटहरू अंग्रेजीसँग उपयुक्त छन्। यी साइटहरूको बुक गर्न सीमित गुंजाइश छ, तर म तपाईंलाई पहिले प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ यदि तपाईं यी साइटहरूमा बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्राभलको: तपाई एकाधिक बुकि sites साइटहरु लाई तुरुन्त हेर्न सक्नुहुन्छ
"ट्राभेलको" एक तुलना साइट हो जुन "ट्रिभगो" र "ट्रिप एड्भाइजर" जस्ता धेरै होटल आरक्षण साइटहरूबाट तत्काल सस्तो आवास योजनाहरू फेला पार्दछ। यस साइटले टुर रिजर्भेसन साइटहरूको एक धेरैबाट बिभिन्न टुरहरूमा जानकारी प्रदान गर्दछ र यसलाई प्रस्ताव गर्दछ। ट्राभेलको मुख्यालय टोकियोमा रहेको कम्पनीले सञ्चालन गरेको छ, मूलतः जापानी भाषामा सूचना पोष्ट गर्दै, भर्खरै अंग्रेजी साइट पनि सुरु भयो। त्यो तल साइट हो। म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि यो साइट जाँच गर्नुहोस्।
TRAVELKO - सस्तो होटल: मूल्य तुलना साइट। उचित होटलहरूमा छुट छुटहरू खोज्नुहोस्।
TRAVELKO - होटल खोज्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो साइट खोजी र ...
भ्यागाजिन: जापान भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको लागि सिफारिश गरिएको आरक्षण साइट
"भोयागीन" टिकट र यात्राको लागि जापानको रकुतेन ग्रुप द्वारा प्रबन्धित साइट हो। यो साइटले अ supports्ग्रेजीलाई पनि समर्थन गर्दछ।
भ्यावाजीन महान सुमो रेसलिंग जस्ता क्षेत्रमा बलियो छ जुन जापान भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू विशेष रूचि राख्छन्। भोयागाइनको साइट हो यहाँ। कृपया जाँच गर्नुहोस् कि तपाईं साईन गर्न चाहानुभएको भ्रमणहरू यस साइटमा पोष्ट गरिएको छ।
भाईटर: विश्वव्यापी साइट जहाँ तपाईं जापानी टुरहरू बुक गर्न सक्नुहुनेछ
"Viator" एक विश्वव्यापी भ्रमण आरक्षण साइट हो जुन हाल "TripAdvisor" समूह द्वारा संचालित छ। विभिन्न जापानी गतिविधिहरू र टुरहरू पनि यस साइटमा अ in्ग्रेजीमा प्रस्ताव गरिन्छ। कृपया यो साइटमा हेर्नुहोस्। Viator तल छ।
लोकप्रिय टिकटहरू र टुरहरू आरक्षणका साथ छिट्टै भरिन्छन्। जे भए पनि, छिट्टै पाउनुहोस्!
गर्नुपर्ने कार्यहरू, टिकटहरू, यात्रा र आकर्षणहरू २०२० | Viator
भ्रमण, गर्न चीजहरू, दर्शनीय पर्यटन, दिन यात्राहरू ...
टोक्यो ग्रान्ड सुमो टूर्नामेन्ट = शटरस्टकमा उच्च श्रेणीको सुमो रेसलरहरू भीडसँगै लाइन लगाउँछन्
यदि तपाईं जापानको लक्जरी होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई दरबान सेवाको साथ होटल बुक गर्न सिफारिस गर्दछु। आवास बुकिंग गरेपछि तपाईले आफ्नो होटेलको ढोकाबाट बिभिन्न टिकटहरू इत्यादि आरक्षणको लागि आदि गर्न सक्नुहुन्छ।
द्वारपाल्य सेवा युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा विकसित भएको छ, तर हालसालै जापानमा त्यहाँ लक्जरी होटलहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ जसले बिस्तारै यस सेवालाई थाल्दछ।
दरबान सेवाको साथ होटलहरू
जापानी दरबन्दीहरू अझै पनि युरोपको तुलनामा तुलनात्मक हिसाबले अनुभवहीन छैनन्। तर ती पाहुनाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न कडा परिश्रम गर्दछन्। मैले यसअघि ग्रान्ड हयात टोकियो र प्यालेस होटल टोकियोमा द्वारपालहरूको अन्तर्वार्ता लिएको छु। तिनीहरू धेरै पेशेवर सचेत थिए र उनीहरू पाहुनाहरूको लागि सहयोगी हुन चाहन्थे। यदि तपाईंले जापान जाने निर्णय गर्नुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि जति नै चाँडो होटल बुक गर्नुहोस् र द्वारपालकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
पर्याप्त दरबन्दी सेवा भएको होटलहरूको रूपमा, म निम्न होटलहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु।
टोक्यो: ग्रान्ड हयात टोकियो, प्यालेस होटल टोक्यो, अमन टोक्यो, कोनराड टोक्यो, पेनिन्सुला टोक्यो, शान्ग्री-ला होटल टोक्यो, इम्पीरियल होटल टोकियो, पार्क हयात टोक्यो, हिल्टन टोक्यो, चार सीजन होटल मारुनूची टोक्यो, मन्डारिन ओरिएंटल टोक्यो
क्योटो: हयात रीजेन्सी क्योटो
ओसाका: सेन्ट रेगिस ओसाका
क्लब फ्लोर सम्पन्न संग होटल
केही लक्जरी होटलहरूमा क्लब फ्लोरहरू छन् जहाँ अतिथिहरूले द्वारपालक सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन्। मलाई लाग्छ कि हाम्रो क्लब फ्लोरमा यी कोठा बुक गर्न र तपाईंको टिकट बुकिंगको बारेमा स्टाफलाई परामर्श लिनु राम्रो विचार हो। जे होस्, क्लब फ्लोरको अवधारणा होटल देखि होटल सम्म फरक हुन्छ। होटलमा निर्भर रहन्छ, त्यहाँ एक क्लब फ्लोर पनि छ जहाँ त्यहाँ केवल एक कुना छ जहाँ तपाईं पेय र मिठाईहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
क्लब फ्लोरमा तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त दरबन्दी सेवा भएको होटलहरूको रूपमा, म निम्न होटलहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु।
साप्पोरो: सप्पोरो ग्रान्ड होटल
टोक्यो: रिट्ज-कार्ल्टन टोक्यो, शान्ग्री-ला होटल टोक्यो, ग्रान्ड हयात टोक्यो, प्यालेस होटल टोक्यो, टोकियो मैरियट होटेल, केियो प्लाजा होटल टोक्यो
योकोहामा: योकोहामा बे होटल टोक्यू
क्योटो: रिट्ज-कार्लटन क्योटो
ओकिनावा: रिट्ज-कार्ल्टन ओकिनावा, एएनए क्राउन प्लाजा होटल ओकिनावा हार्बर दृश्य
दरबन्दीका लागि, मलाई लाग्छ कि तपाईं आफ्नो यात्रा कार्यक्रममा अधिक सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको होटेलको दरबानले तपाईंको अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिदैन भने, तपाईं होटल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको यात्रालाई सन्तोषजनक बनाउन द्वारपाल सेवाको अधिकतम प्रयोग गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
जापानमा कुनै टिप कस्टम छैन, त्यसैले तपाईले चिप्स द्वारपाललाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पर्दैन। जहाँसम्म, यदि तपाईं उनीहरूलाई धेरै समस्यापूर्ण कामका लागि सोध्नुहुन्छ भने, तपाईं सँगै चिप्स पनि दिन सक्नुहुन्छ।
द्वारपालहरूको आफ्नै क्रस-नेटवर्क हुन्छ। त्यसो भए, उदाहरणको लागि, तपाईं टोकियोको होटेलमा सप्पोरोको भ्रमणको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा थियो टोकियो होटेलमा एउटा ढोकाले भनिरहेकी थिई कि उनले ओलम्पिक खेलहरू ब्राजिलमा हुँदा रूथको ट्याक्सीमा आफ्ना पाहुनाहरूलाई आरक्षण दिएकी थिई। यी दरबन्दीहरूको सेवाहरूको उपयोग गरेर विभिन्न टिकट र यात्राको लागि रिजर्भेसन गरौं।
प्रत्यक्ष कार्यक्रम, FUJI ROCK 2018, गर्मी, Naeba, Niigata, जापान = शटरस्टक
यदि तपाइँको साथी वा परिचित जापान मा बस्छन्, म सिफारिस गर्दछु कि तपाइँलाई एक आरक्षण गर्न को लागी सोध्नुहोस्।
माथि उल्लेख गरेझैं जापानमा धेरै आरक्षण साइटहरू उपयोगी छन्। यदि तपाइँका साथीहरू वा परिचित व्यक्तिहरूले जापानीलाई थोरै पनि बुझ्न सक्दछन् भने, तिनीहरू बुकिंग साइट प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्। जापानका सुविधा स्टोरहरूमा विशेष टर्मिनलहरू छन् जुन ग्राहकहरू आफैंले विभिन्न टिकट बुक गर्न सक्दछन्। तिनीहरू ती टर्मिनलहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
जापानी बेसबल खेल (हक्स बनाम भैंसहरू) = शटरस्टकको समयमा बलनहरू
विदेशी पर्यटकहरूको लागि स्टोरहरूमा खरीद गर्नुहोस्
यदि तपाईं जापान आइपुगे पछि टिकट र भ्रमण बुक गर्नुभयो भने, लोकप्रिय टिकटहरू र यात्राहरू अब उपलब्ध हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा, तपाईं विदेशी टुरिस्टका लागि पसलहरूमा जान चाहानुहुन्छ कि जाग्न र तपाईंको लागि कुनै रोचक टिकटहरू आदि छ कि भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ।
टिकट आज: तपाईं स्थान मा सिफारिश टिकट किन्न सक्नुहुन्छ
उदाहरणको लागि, जापानमा, "टिकट टुडे" स्टोरहरू हालै भइरहेको छ। "आज टिकटहरू" ले everyday० भन्दा बढी प्रदर्शनहरू लिन्छ र ती समान-दिन र अग्रिम टिकटहरू बेच्छ। तिनीहरू उदाहरणका लागि परम्परागत कला, एनिमे, संगीत, नाटक, नृत्य र यस्तै हुन्। "आज टिकटहरू" हरेक बिहान o'clock बजे खुल्छ, त्यसैले यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने जाँच गर्नुहोस्। "आज टिकटहरू" को विवरणहरूको लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
सुविधा स्टोरको टर्मिनल प्रयोग गर्दै
जापानमा धेरै सुविधाजनक स्टोरहरू छन्। जापानको शहरमा सुविधा स्टोर खोज्न एकदम सजिलो छ। तपाईं पनि यस सुविधा स्टोर भित्र टर्मिनलहरू प्रयोग गरेर टिकटहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
लोप्पी: टर्मिनलको गाईडका अनुसार टिकट खरीद गरौं!
सब भन्दा प्रख्यात टर्मिनल "लोप्पी" सुविधा स्टोर "लसन" मा स्थापना गरिएको हो। तपाईं यस टर्मिनलमा उपयोगिता बिलहरू, बीमा उत्पादनहरू खरीद गर्न, टिकटहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। टर्मिनल स्क्रिनमा प्रदर्शित निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्, तपाईं जापानमा फुटबल खेलहरूको लागि टिकट, स्टुडियो गिब्लीको लागि प्रवेश टिकट, टोकियो डिस्ने रिसोर्ट र युनिभर्सल स्टुडियो जापानका लागि पासपोर्ट, र अधिक किन्न सक्नुहुनेछ। म चाहान्छु तपाई महान टिकट पाउनु हुन्छ!
3 रोमाञ्चक खेल अवलोकन र जापानमा सिफारिस गरिएका Activ गतिविधिहरू! सुमो, बेसबल, शीतकालीन खेल ...
जापानमा in प्रकारका आवास: होटल, र्योकन, शुकुबो आदि।
जापानमा होटल बुकिंगका लागि सिफारिश गरिएका साइटहरू उपयोगी
हवाईजहाज, रेलमार्ग, बस र ट्याक्सीहरूको सम्बन्धित साइटहरू जुन जापानको यात्रामा उपयोगी छ